fandefasana - Micro-Semiconductor.com
Micro-Semiconductor.com dia manolotra karazana fomba fandefasana entana: afaka manampy anao izahay handamina ny fandefasana ny fonosana amin'ny alàlan'ny Fedex, DHL, UPS, TNT, EMS, na fomba hafa tianao, azonao atao ny misafidy ny serivisy lozisialy anao raha toa ianao ka niara-niasa tamin'ny fanaterana manokana. orinasa koa izahay dia manaiky ny fomba fandefasana araka ny angatahan'ny mpanjifa.
Ny vidin'ny fandefasana dia mifototra amin'ny habeny, lanjany, alehan'ny fonosana. Manana fifandraisana orinasa maharitra amin'ny FedEx sy DHL izahay. Hiezaka araka izay tratry ny herinay izahay hanolotra anao ny vidiny mazava tsara. Ho an'ny fiarovana ny fonosana dia hividy fiantohana ho an'ny ampahany be izahay.
Fandefasana maimaimpoana eran-tany amin'ny baiko mahafeno fepetra mihoatra ny USD $ 1000.00 amin'ny alàlan'ny DHL / FedEx. Raha ny totalin'ny vola ambanin'ny USD1000.00 dia hanampy vidin'ny fandefasana USD60-110.00 amin'ny DHL / FedEx mifototra amin'ny lanja / habe.
Matetika ny mpitatitra dia manome kaonty an-tserasera hitantanana ny fandefasana anao sy ireo fiasa mandroso kokoa aza.
Manaraka ny politika sy ny fitsipika fanondranana rehetra izahay. Ny vokatra sasany dia mety ferana ITAR ary ny famerana ny fanondranana dia mety hiteraka fahatarana amin'ny fotoana fitaterana.
Fotoana fandefasana sy toeran-kaleha
Izahay dia handamina ny fandefasana ao anatin'ny 1-2 andro manomboka ny datin'ny entana rehetra tonga ao amin'ny trano fitehirizan-tenanay.
a). Ny andro fiasanay dia ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma tsy anisany sabotsy sy alahady ary fialantsasatra.
b). Ny ora fanaterana dia miankina amin'ny fomba fandefasana sy ny tanjon'ny fandefasana.
Ny adidy, ny hetra ary ny sarany hafa dia andraikitry ny mpandray, satria ny sarany ihany no miantoka ny saram-pitaterana entana. Raha hanombatombana ny vidiny dia miangavy anao hijery biraon'ny ladoany ao amin'ny firenenao.
Ity misy latabatra fanaterana fotoana avy amin'ny trano fanatobiana entana mankany amin'ny toerana halehanao ho an'ny referansa.
* Ny ora fandefasana sy ny fandefasana dia isaina amin'ny andro fiasana manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Raha misy fialantsasatra lehibe toy ny Krismasy dia mba avelao ny fotoana fandefasana fanampiny. Mandritra ireo fotoana manokana ireo dia hampahatsiahivinay anao ny mety fanemorana.
Ireto firenena manaraka TSY AZontsika alefa, noho ny politika: Afghanistan, Repoblikan'i Afrika Afovoany, Repoblikan'i Cote d'ivoire, Repoblika Demokratikan'i Kongo, Repoblika Entim-bahoaka demokratika any Korea, Commonwealth of Eritrea, The Republic of Lebanon, Repoblikan'i Liberia, Repoblika Demokratika Somalia, Repoblikan'i Sudan.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fandefasana dia mifandraisa aminay info@Micro-Semiconductors.hk